Xubin cusub oo jirka binaadamka katirsan oo la ogaaday – The Voice of Northeastern Kenya
Posted in Faallo, QORAALADA GAARKA AH, WARARKA
Xubin cusub oo jirka binaadamka katirsan oo la ogaaday
Saynisyahanno ka tirsan Mac’hadkadka Garvan ee cilmi-baarista caafimaadka ee dalka Australia ayaa helay “xubin yar” oo ka tirsan jirka aadanaha oo aan horey loo aqoon, xubintani waxey mas’uul ka tahay la falgalka nidaamka difaaca jirka marka uu cudur ku soo laalaabto mar kale.
Xubintan cusub ayay u bixiyeen “subscapular proliferative foci” taas oo habdhiska difaaca ku taageeraysa inuu xasuusto cudurkii horey u soomaray, saynisyahannadu waxey horey u ogaayeen in ay jiraan unugyo noocaas oo kale ah jirka aadanaha, laakiin halka uu ku yaallo ma aaney garaneyn, haddase arrintaasi wey u suuraggashay.
Shabakada Science Alert ayaa sheegtay in saynisyahannada xubintan cusub daahrogay ay ka heleen dusha sare ee Iymph nodes ee jiirka macmalka laga baaray. iyagoo isticmaalaya microscope laser ah, kaas oo suuraggal ay tahay in lagu qaado sawirro heer sare ah oo 3D. markii ay baaritaan ku sii sameeyeen xubintan jirka aadanahana wey ka heleen.
Cilmi-baaristan ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqaysa in xubintan cusubi ay ku taallo goob aad u wanaagsan si falcelinta difaca jirka uu u noqdo mid si degdeg badan cudurka u difaaca.
marka marlabaad oo ay bakteeriyadii jirka soo weerarto waxa uu u baahan yahay inuu soo saaro Iymph nodes -kii loo baahaana si uu cudurka uga hortago.
Marka uu jirku bakteeriyo dilaa ah la dagaallamo muddo 20-30 daqiiqo ilbiriqsi kastaa muhiimadeeda ayay leedahay. haddii aan si kale u dhigno, falcelinta habdhiska difaaca jirka haddii uu gaabis noqoto qofku wuu dhimanayaan, sidaa dartaad; qofku inuu tallaal helo waa muhiim si uu jirku ula sii qabsado oo uu u diyaar sanaado si marka uu mar labaad arko cudurkii uu uga hortago si dhakhsiyo badan.” Sida uu sheegay mid kamid ah cilmi-baarayaasha .
XIGASHO: Science Alert
WAXAA QORAY JAMAL AHMED(JAMALUDIN)
Scientists Have Discovered a Brand New 'Micro-Organ' in The Human Immune System https://t.co/wRsOxT2MT1 pic.twitter.com/XHpdEzxSef
— Dean Fowler (@deanfowler23) August 25, 2018
← Daraasad Muujineysa Dhinaca Madow ee Ay Leedahay Xaasidnimada.
African Union troops leave Somali stadium as part of gradual pullout →